Upelo lwesiNgesi lobugcisa bentsimbi yintsimbi. Umnyama ubhekisela kumbala wesikhumba wentsimbi. USmith ligama elixhaphake kakhulu. Ubuchwephesha bentsimbi bunembali ende, kwaye uphuhliso lwezixhobo zobugcisa bentsimbi kunye nobugcisa bunenkqubo yokuphuhlisa iminyaka engaphezu kwama-2,000. Ubugcisa be-iron, njenge-architectural dec...
Umhombiso wefenitshala yasekhaya, isitayile esipholileyo nesinefashoni
Iintsapho ezisingqongileyo azifane zisebenzise impahla yasekhaya ukuhombisa indawo yazo. Uninzi lwesizathu silele kwiingcamango zabantu zemathiriyeli yobugcisa bentsimbi ebandayo, eqinile kwaye inexabiso eliphantsi. Ngophuhliso olukhawulezayo lwenqanaba lemizi-mveliso, iteknoloji yokulungisa ubugcisa bentsimbi igcina isantya namaxesha. Intsimbi ekhandiweyo...
Itafile yekofu yemarble kwigumbi lokuhlala
Itafile yekofu yenye yefenitshala ebalulekileyo kunye nencinci kwigumbi lokuhlala. Sihlala sineengcamango ezininzi xa sikhetha, okanye sifuna umthamo omkhulu, okanye njengexabiso eliphezulu, ubukhulu obuhlukeneyo begumbi lokuhlala, kunye nokusukela ukuyila itafile yekofu. Eyahlukileyo. Namhlanje siza kujonga izinto ezipholileyo ...
Itafile yekofu ihambelana nesofa, ingashiyi indawo engenanto ekoneni
Amehlo abantu ahlala egxile kubalinganiswa abanje ngeesofa kunye neetafile zekofu. Njengoko wonke umntu uyazi, impembelelo yendima exhasayo njengoBian Ji kwipatheni yonke ayifanele ijongelwe phantsi. Itheyibhile esecaleni enomoya ayinakuba kuphela ukugqiba kwabaphilayo...
Itafile yekofu yecala elinye, ukufezekisa i-aesthetics yegumbi lokuhlala
ngu admin on 21-11-04
1. I-Nordic light luxury coffee table I-countertops yetafile yekofu inkulu okanye incinci, kwaye uyilo sisikwere kwaye sijikeleze. Sidla ngokukhetha ngokwezinto esizithandayo. Ngesiseko sokuhambelana ne-sofa, ubuhle kunye nokusebenza kwegumbi lokuhlala kunokufezekiswa. Itafile yeti...
Uluhlu olubanzi lokusetyenziswa kobugcisa bentsimbi yanamhlanje
Isitulo sentsimbi ekhandiweyo Izinto zentsimbi zenza ukuba imilenze exhasayo ibonakale ibhityile kwaye imenyezela. Uyilo olujikelezayo lubukeka luhle kakhulu. Ngombala we-cushion okhanyayo, unokususa imvakalelo ebandayo yobugcisa bentsimbi, ishiya imvakalelo efudumeleyo nekhululekileyo yasekhaya. . Kuhle ukuthwala umthwalo ab...
Iwotshi yodonga lwegumbi lokuhlala, ukwaphula i-aesthetics esisigxina yendabuko
Nangona iifowuni zabantu zanamhlanje zingashiyi umzimba, kulula kwaye kulula ukujonga ixesha, kodwa iwashi yodonga iyimfuneko ekhaya. Akuyona nje isixhobo sokujonga ixesha, kodwa kunye nomhlobiso eludongeni. Iwotshi yesiqhelo eludongeni iyanelisa...
Ifenitshala yentsimbi eyenziwe ngeRetro enamacala amabini ubuhle bekhaya
Akunzima ukufumanisa ukuba asifane sisebenzise ifenitshala yentsimbi xa sihombisa kwaye sihombisa. Enyanisweni, kukho esinye isizathu sokuba abantu bangayikhethi ifenitshala yentsimbi ekhandiweyo. Indlela eyenziwe ngayo intsimbi iyabanda yaye iqinile, yaye idla ngokwenza abantu bazive berhabaxa. Enyanisweni, abaninzi baye ba...
Umtsalane wemizobo yentsimbi ekhaya
Ukugcinwa kwigumbi lokuhlala kunokwahlulwa kwindawo yekhabhinethi yeTV kunye nendawo yesofa. Abantu abanee-clutter ezininzi baya kukhetha ngokwemvelo uyilo lwefenitshala yomthamo omkhulu ukuhlangabezana neemfuno zabo zokugcinwa kwemihla ngemihla. Isifuba esikhulu sedrowa sanele. Abo bafuna ngakumbi ubuhle kunye nokuhombisa ...
Ukuhlobisa ngohlaza, ukuhlaziya ngokubonakalayo
Nokuba usitshintsha njani isitayile segadi ye-balcony, izityalo eziluhlaza ziyimfuneko. Ebusika, uhlaza lubonisa amandla, kwaye ehlotyeni, okuluhlaza kukuphola okubonakalayo kwaye kuthomalalisa ukucaphuka kwakho kwangaphakathi. Ukongeza kwizitendi zeentyatyambo kunye nezityalo ezineembiza, indawo eludongeni inokuhonjiswa, kusetyenziswa igri...
Ukukhanya okunethezeka kobugcisa bentsimbi kubomi bemihla ngemihla
ngu admin nge 21-10-04
Umhombiso wobunewunewu okhanyayo uthandwa kakhulu kwiminyaka yakutshanje kwaye uthandwe ngabantu abaninzi. Ifenitshala yentsimbi ekhandiweyo inokuthiwa yinto emele ukukhanya kwesitayela sokunethezeka. Lilonke, imilo kunye nombala wefenitshala yentsimbi iphucukile kwaye intle, kwaye ...
Intsimbi esetyenzisiweyo yokuhombisa udonga lwasekhaya
Umzobo wentsimbi yentsimbi Udonga olumhlophe olumnandi, xa kuthelekiswa nombala omnyama weklasikhi, lusebenzisa izinto zentsimbi ezimibalabala zokuhombisa ikhaya, ezinokuhlanganisa amandla egumbi lonke. Udonga lufana nomqulu omkhulu wemifanekiso, ikuvumela ukuba ushukume imibono yakho, sebenzisa izinto zentsimbi ukwenza ngokukhululekileyo ...
UbuGcisa beGadi banamhlanje, Metal Garden Decoration, ilanteni yokuhombisa, isibane esikhokeleyo, Garden Decor Metal, izibane zelanga,